လူသားများ၏ မျိုးရိုးဗီဇပင်မဆဲလ်များ Stem Cells ကို ပုံတူမျိုးပွား (Clone) ပြုလုပ်နိုင်ပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » လူသားများ၏ မျိုးရိုးဗီဇပင်မဆဲလ်များ Stem Cells ကို ပုံတူမျိုးပွား (Clone) ပြုလုပ်နိုင်ပြီ
လူသားများ၏ မျိုးရိုးဗီဇပင်မဆဲလ်များ Stem Cells ကို ပုံတူမျိုးပွား (Clone) ပြုလုပ်နိုင်ပြီ
Posted by Mr WorldWide on May 29, 2013 in Health & Fitness, Science & Religion, Sciences & Resources | 8 comments
သက်ရှိလူသားဆဲလ်များမှ ပင်မဗီဇဆဲလ်များ ကလုန်းလုပ်ယူခြင်းကို အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Portland ပြည်နယ်ရှိ Oregon Health&Science University မှ သုတေသနအဖွဲ့ကအောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်နိုင် ခဲ့ပါသည်။ ကျန်းမာသောကိုယ်ခန္ဓာဆဲလ်များမှ မူလဗီဇဆဲလ်ကို ဖန်တီးယူခြင်းသည် ကမ္ဘာ့တစ်ဝန်းမှ သုတေသန ပညာရှင်များ နှစ်ပေါင်းများစွာ အပတ်တကုတ်လုပ်ဆောင်နေသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖန်တီးနိုင် ခြင်းသည် ရောဂါကြောင့်လည်းကောင်း၊ အသက်အရွယ်အရလည်းကောင်း သေဆုံး၊ သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာရနေ သော ဆဲလ်များနေရာတွင် အသစ်တစ်ခုအစားထိုးပေးနိုင်ရေးစသည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်များအတွက် အဓိကအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းထဲတွင် ကိုယ်အင်္ဂါများအစားထိုးကုသရေးအတွက် အသဲ၊ကျောက်ကပ်၊ နှလုံးတို့ကို အသစ်တစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးခြင်းနှင့် Parkinson ရောဂါကဲ့သို့ ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများခံစားနေရသူများအတွက် အစားထိုးကုသပေးနိုင်ခြင်းတို့လုပ်ဆောင်လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၄င်းသုတေသနလုပ်ငန်းအား Oregon National Primate Research ၏ Reproductive and Development Science ဌာနမှ Mr.Shoukhrat Mitalipov က ဦးဆောင်၍သုတေသနလုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့တွေ့ရှိထားသော ဗီဇဆဲလ်ပြောင်းလဲမှုအား somatic cell nuclear transfer ဟုအမည်ပေး ထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
သုတေသနအဖွဲ့သည် နို့တိုက်သတ္တ၀ါများကို ၄င်းတို့တွေ့ရှိထားသော ဆဲလ်များနှင့်စမ်းသပ်ရာ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး လူသားများကိုပါစမ်းသပ်နိုင်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ သုတေသနပြုလုပ်မှု သည် လူသားကလုန်းဖန်တီးနိုင်သည့်ဘက်သို့ ဦးတည်နေပုံရှိသော်လည်း Mr.Mitalipov က ၄င်းတို့သုတေသန လုပ်ငန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အနာဂတ်တိုက်ပွဲများ၌ ဒဏ်ရာရလူနာများအတွက် အစားထိုးကုသပေးရေးကိုသာ ရည်ရွယ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၂ ယောက်လောက်ပဲ ပွါးထားပြီး ကိုယ်တိုင် က လုပ်ချင်တဲ့ ကိစ္စလေးတွေ ရှိနေသေးလို့ပါ။
လူသား ကလုန်း ဖန်တီးနိုင်ဖို့ ဦးတည်တယ်။
တစ်ဆက်တည်း လူသားတွေ သက်တမ်း ရှည်ရှည် နေရဖို့ကော ဦးတည်နေသလားမသိ
The Island ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်သွားသတိရမိတယ် ပြောပြန်ရင်လည်း
လာဗြန်ဘလား ဒီ စကားလက် ဖြစ်အူးမယ်
ပြောသာပြောရ နာ လည်း အဲ့ရုပ်ရှင်ကြိုက်လယ်။
Ewan McGregor ကြောင့်။
ဘာသာရေးအနေနဲ့.. ဘယ်လိုတွေးမလည်း.. မြင်မလည်း.. ဆွေးနွေးကြည့်ချင်သား…
ကလုန်းတကောင်က.. လူသတ်…. ခိုး..၀ှက်.. အကုသိုလ်လို့နာမယ်ရှိတာအကုန်လုပ်…။
ကလုန်းတကောင်က… အလှူလုပ်.. တရားထိုင်.. ကုသိုလ်လို့.. နာမယ်ရှိတာအကုန်လုပ်…။
ရှေးရှေးဘ၀က.. ကံဆိုတာကြီးကရော.. ဘယ်ဂျောင်ကပ်နေရမှာလည်း.. ဗျ..။
သူဂျီးရယ်———- အဲ့ဒီမျိုးရိုးဗီဇနဲ့ မွေးမယ့်ဟာတွေက အဖေမရှိ အမေမ၇ှိပဲ လူဖြစ်လာရမယ့်ကံပါလာလို့ ကို အဲ့ဒီလိုမွေးလာတာ—-
-ကလုန်းတကောင်က.. လူသတ်…. ခိုး..၀ှက်.. အကုသိုလ်လို့နာမယ်ရှိတာအကုန်လုပ်…။အဲ့ဒီကလုန်းကောင် သူ့ အကျိုးပေးနဲ့ သူသွားမှာပေါ့
ကလုန်းတကောင်က… အလှူလုပ်.. တရားထိုင်.. ကုသိုလ်လို့.. နာမယ်ရှိတာအကုန်လုပ်…။သူလည်း သူ့ အကျိုးပေးနဲ့သူသွားမှာပေါ့ဗျာ—————–
ပြီးတော့ ငရဲနဲ့ နတ်ပြည်ဆိုတာbuddhism တစ်ခုတည်း ရှိတာမဟုတ်——– ဖန်ဆင်း၇ှင် ၀ါဒတွေမှာလည်း( သဘောတရားချင်းမတူပေမယ့်) ကောင်းကင်ဘုံတို့ငရဲဘုံတို့ ရှိတာပဲလေ—— ဟုတ်ဘူးလား———- — ကွိကွိကွိ————
လူတစ်ယောက်ကို စက်ပစ္စည်းလို မကောင်းတဲ့အပိုင်း ဖြုတ်လဲတပ် သလို ဖြစ်နေမလား။ :O: